Jowhar.com : Somali Leader News - News: 20-sano kadib baarlamaanka Talyaaniga oo ka hadlay saxafiyad Talyaani ah oo lagu dilay Soomaaliya
April 24 2014 01:25:33
20-sano kadib baarlamaanka Talyaaniga oo ka hadlay saxafiyad Talyaani ah oo lagu dilay Soomaaliya
Afhayeenka baarlamaanka Talyaaniga Laura Boldrini ayaa sheegtay in ay ku faraxsan tahay in dowlada Talyaaniga ay soo saarto aqbaar qarsooneyd oo ku saabsan dilkii Ilaria Alpi iyo filim qaade u dhashay dalka Slovenia Miran Hrovatin.
Dadka baarayay dilkii labada saxafi ayaa waxa ay muddo dheer ka shakisanaayeen in dilka saxafiyiinta ay ka dambaysay doonitaan ah in aan la ogaan in deeqaha dowlada Talyaaniga gacanta loo geliyo urur ka ganacsada hubka iyo haraaga sumaha.
Alpi oo ahayd 32 jir iyo Hrovatin oo 45 jir ahaa ayaa waxaa weeraray koox hubeysan magaalada Muqdisho bishii March 20, 1994. Waxaana muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabo Hashi Omar Hassan lagu xukumay 26 sano oo xarig ah kadib markii lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay dilka labada saxafi. Guddi uu u saaray baarlamaanka Talyaaniga baaritaanka dilkan oo shaqeynayay intii u dhexeysay July 2003 illaa iyo February 2006 ayaa baaritaankoodii ku soo gunaanuday in Alpi iyo Hrovatin ay u dhinteen isku day lagu doonayay in lagu afduubto kaasoo qaldamay. Si kasta ha ahaatee, guddiga ayaa sheegay in ay jireen isku dayo badan oo ay Militariga iyo diblumaasiyiinta ku doonayeen in lagu yareeyo ama hoos loogu dhigo kiiska labada saxafi. Mucaaradka bidix-dhexe ayaa ku tilmaamay arrinkaas mid aan la aqbali karin, waxana uu sheegay inaysan jirin cadeymo ku filan oo tilmaamaya in dilka saxafiyiinta uu ahaa mid afduub lagu damacsanaa.
Warkan oo uu daabacay Gazzetta del Sud ayaa intaa ku daray in wax baaritaan ah aan lagu sameyn meydka saxafiyiita balse sawiro oo kaliya laga qaaday meydka Alpi oo u shaqeyneysay Kanaalka saddexaad ee taleefishinka RAI.
Sawiradii iyo warbixin caafimaad iyo weliba cadeymo kale oo muhiim ahaa oo ahaa qoraaladii Alpi,cameradii ay wateen,cajaladooyin muuqaalo ku jireen ayaa lagu waayay safar dib loogu soo celinayay dalka Talyaaniga, waxayna taasi sii holcisay shakigii ahaa in wax la qarinayay.
Bilowgii baaritaanka kiiskan ayaa waxaa loo malaynayay in dilka saxafiyiinta uu ahaa mid ay dhexda ugaga dheceen dagaalo aargoosi salka ku hayay oo u dhexeeyay hogaamiye kooxeedyo iyo ciidamada nabad ilaalinta ee ka socday dalka Talyaaniga.
Balse sanadkii 1999kii buug ay daabaceen waalidka Alpi oo loogu magac daray The Execution ayaa dhaliyay shaki ah in Alpi iyo Hrovatin loo dilay si loo joojiyo waxa ay ka ogaayeen shabakad hubka ka ganacsata iyo sidoo kale daabulida sumaha haraaga ah, taasoo sababtay khilaaf dhinaca siyaasada,milatariga iyo dhaqaalaha ee labada dal. Buugga oo markii dambe isu rogay filim ayaa ku eedeeyay hay�ada sirdoonka Talyaaniga SISMI oo markii dambe loo bixiyay AISE, in ay qeyb weyn ku lahaayeen shabakadan. Muwaadin Soomaaliyeed Xaashi Cumar Xasan oo loo geeyay dalka Talyaaniga 1998dii inuu ka marqaati furo sida xun oo ay ula dhaqmeen ciidamada Talyaaniga dad Soomaaliyeed, balse Xaashi ayaa markii dambe lagu eedeeyay in uu ku lug lahaa dilka loo geystay labada saxafi.
Xaashi ayaa ku heshay maxkamad racfaan ah dambi sanadkii 2000 waxaana lagu xukumay xabsi daa�in.
Sanadkii 2001gii ayaa maxkamada sare ee Talyaaniga ayaa ka qafiifisay Xaashi xabsi daa�inkii waxaana loogu bedelay 26 sano oo xarig ah, iyadoo u sababaysay in dambigu uu ahaa mid aan ulakac ahayn. Balse qareenada Xaashi ayaa waxa ay ku doodeen in uusan Xaashi uusanba joogin Muqdisho xilligii dambiga uu dhacayay isla markaana lagu soo qiyaanay imaanshihiisa dalka Talyaaniga.
0 Comments · 2672 Reads
Jowhar.com738,059 unique visits